Vaovao - Amin'ny indostria maoderina, ny teknolojia microporous vy sy vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro
Amin'ny indostria maoderina, ny teknolojia microporous metaly sy vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro
Amin'ny indostria maoderina, ny teknolojia microporous metaly sy vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro. Anisan'izany, ny vokatra vita amin'ny lamba (lamba fitafiana sy lamba an-trano) ary ny vokatra fiarovana ara-pahasalamana dia ampahany betsaka. Manomboka amin'ny akora (poti-javatra simika) ka hatramin'ny vokatra vita, ny akora dia tsy maintsy mandalo dingana maromaro, toy ny famolavolana, fanenomana, fandokoana, fanjairana sns, ary ny dingana lehibe indrindra dia ny famindrana ireo akora avy amin'ny sombiny amin'ny kofehy simika, ka nanjary nisy ny teknolojia spinneret.
Spinneret dia antsoina koa hoe spinnerette. izy io dia karazan-javatra misy lavaka kely maro ao amin'ny thimble toy ny noza vy ampiasaina amin'ny fihodinan'ny fibre simika. Ny fitaovana atsonika na levona simika, avy eo dia potserina avy ao anaty lavaka mba hamorona filament, izay manamafy ny fanondrahana, ny etona na ny fampangatsiahana. Ny spinnerets dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, fa ny famokarana rayon dia mila platinum. Ny habe sy ny endrik'ireo lavaka mihodinkodina dia mamaritra ny endrik'ilay filamenta. Ny lavaka tsirairay dia mamorona filamenta tokana, ary ny filamenta mitambatra dia mamorona kofehy filamenta.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny covid-19 eto amin'izao tontolo izao, ary koa ny fipoahana any Etazonia sy Eoropa, ireo vokatra fiarovana miaraka amin'ny haitao fototra amin'ny lamba tsy tenona (lamba namboarina / nopotsehina notapatapahina lamba) dia nahasarika ny sain'ny olona indray. Manomboka amin'ny korontana eo am-piandohan'ny valanaretina ka hatramin'ny fepetra takiana amin'ny kalitao vaovao, dia nivoatra ny orinasanaymitsonika tsofina spinnerets & spinneret mifamatotra mifamatotra & spinneret die header & tsipika famokarana lamba tsy tenona hihaona amin'ny tinady tsena, ary ahazoana valiny tsara amin'ny tsena.
Ho fanampin'izany, ny orinasanay koa dia manana anjaran-tsena lehibe amin'ny spinnerets ampiasaina amin'ny lamba fanenomana nentim-paharazana, toy ny spinnerets mitambatra isan-karazany (karazana nosy-dranomasina / Solona mahantra-fototra karazana / ampahany-henan'omby karazana), ary aondrana any Azia atsimo atsinanana.
Pp Melt Blown Filter, Fitaovana lamba tsy tenona, Lamba tsy tenona, Pp famokarana lamba tsy tenona, Fomba famokarana lamba tsy tenona, Pp Disc sivana, Vokatra rehetra